Elevator uye Conveyor Factory - China Elevator uye Conveyor Vagadziri uye Suppliers
Auger-Type Elevator screw conveyor zviyo zvekutamisa mbeu
Iyo Auger-mhando elevator inogona kusimudza gorosi kana chibage uye ichiisa mukati memuchina wekugadzira kana kurongedza muchina sezvinodiwa.
Kureba uye dhayamita yeelevator inogona kugadzirwa nechikumbiro chemutengi.
Yakanga ichishandiswa zvakanyanya kunzvimbo dzakawanda. Iko kushanda kwepamusoro kwekushanda nemutengo wakaderera.
DTY-10E bhaketi rekusimudzira zviyo muchina wekusimudza
DTY yakatevedzana bhakiti lifti yakagadzirirwa kuenderera yakatwasuka kusimudza kushanda kweupfu uye granular. Inoshanda zvakanyanya pakusimudzwa kwemasheya akawanda mukudyisa zvinhu chirimwa, chigayo cheupfu, uye nzvimbo yekuchengetera zviyo zvezviyero zvakasiyana.
DTY-10S bhaketi yembeu yezviyo revheti yekukuvadzwa kwakaderera kwebhinzi paddy
Pfungwa yedu nyowani yeDTY bhaketi rekusimudzira inobva kuSATAKE bucket lift uye yakagadzirirwa kuenderera mberi yakasimudzwa yakatwasuka kushanda kweupfu, granular uye bundu diki. Inoshanda zvakanyanya pakusimudzwa kwemasheya akawanda mukudyisa zvinhu chirimwa, chigayo cheupfu, uye nzvimbo yekuchengetera zviyo zvezviyero zvakasiyana. Rudzi urwu rweelevator runoshandiswa zvakanyanya munyika dzakabudirira.
Slope elevator bhandi rekutakura zviyo zvekusimudza muchina
Elevator inoshandiswa kutakura mhodzi kana zvimwe zvinhu kusvika kune imwe nzvimbo yakakwirira ne zero kukuvara, pakugadzira mbeu kana zvimwe zvinhu zvakaoma.
Z mhando Bucket Elevator
Z mhando yebucket elevator ndeye yazvino mhando yekusimudza uye yakagadzirirwa kuenderera yakatwasuka kusimudza kushanda kweupfu, granular uye bundu diki. Inoshanda zvakanyanya pakusimudzwa kwemasheya akawanda mukudyisa zvinhu chirimwa, chigayo cheupfu, uye nzvimbo yekuchengetera zviyo zvezviyero zvakasiyana.